Atụmatụ igbu egbugbu Ndị na-emepụta, ndị na - eweta ya - Factlọ Ọrụ Ntugharị Atụmatụ igbu egbugbu China
Atụmatụ Yellow Plastic Disposable
Atụmatụ: uzo, ultra-mkpa, ihe ink nchekwa. 1. Ngwunye agịga na-eme ka ihe translucent mee, na-eme ka ọ dị mfe ịdebe agịga ahụ; 2. Innovative curve slope design, more ink nchekwa na smoother; 3. Akụkụ dị n'akụkụ ọnụ dị ezigbo mkpa, nke na-eme ka ọ dịrị nfe ị nweta agịga ma hapụ ohere. Ndụmọdụ maka ịhọrọ agịga agịga maka agịga egbugbu: A na-ejikwa eriri agịga R (RL, RS) gbaa R, ọpịpị isi (F, M1, M2, RM) F nozzles no. N'etiti t ...
Ngwaahịa ngwaahịa: elu àgwà Pee plastic Product agba: ọcha na uzo Product arọ: banyere 100g / igbe Product nkọwa: a igbe nke 100 igbe, a igbe nke 50, ọnya nkwakọ, dị ọcha na ịdị ọcha, e nwere ugbu a 30 ụdị ịhọrọ site na Atụmatụ n'ihi na ị na-ahọrọ nozzles agịga maka ọ bụ egbugbu: A na-ejikwa eriri agịga R (D, RL, RS) na-eji eriri agịga R na D, na isi ntụtụ isi (F, M1, M2, RM) na-eji F agịga nozzles. N'ime ha, M2 bụ ahịrị abụọ, na nha nha nha nha ...
Ihe eji ekpofu ahịhịa na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ nke na-ejide Kwụsị
Ogo: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F-13F-15F- 17F Pre-igba ogwu mkpofu Disposable Tattoo Atụmatụ ihe: elu mma plastic Ha na-mere nke elu àgwà ọkwa ihe, mfe iji rụọ ọrụ, nnọọ adaba. Atụmatụ igbu ahụ nwere ike ichebe gị pụọ na nje virus. Nkọwa ngwaahịa 1.High mma na ọdịdị ejiji; 2.Mfe iji rụọ ọrụ; 3.na ọkachamara imewe, ike, nchebe, na-abụghị ileghara 4.Competitive price; 5.Good mmetụta na ala mgbe eji m ...
Na-ere site na igbe nke 50 Size: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F -13F-15F-17F High quality PVC siri ike na-egbochi ekwe ekwe tupu igba ogwu site EO Gas n'otu n'otu ọnya packaged All Kwekọrọ n'Ozizi niile tattoo Grips Kpọmkwem n'ọnụ size Ogologo: 50mm Product Description Hurricane disposable igbu egbugbu na-mere si ọgwụ ọkwa plastic, mma na ịdị ọcha. Ọfọn e mere n'ọnụ-enye ohere ezigbo agịga ntinye na magburu onwe ink eruba. Ọkara transperent maka mfe agba id ...
Clear 108mm Sterilized Tips With Grip Stop Transparent Long Disposable Tattoo Tips For Tattoo Mkpa.
Ndụmọdụ igbu egbugbu kachasị elu, ọkachamara na-enweghị atụ na ndụmọdụ egbugbu na-adịghị emerụ ahụ. Qualitydị mma dị elu na nke dị elu Disposable Sterilized Tips Atụmatụ igbu egbugbu Atụmatụ maka egbugbu egbugbu Product Name: Disposable Clear Tattoo Tips E Nwere Nha: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D- 9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F-9F-11F-13F-15F ** 5M-7M-9M-11M-13M-15M Nọmba Ngwaọrụ: ZZ-010 Mbukota: 50Pc / igbe MOQ: 10 Igbe Quality: 1st Class Product name: igbu Atụmatụ Ihe: Plastic mbukota: 50pcs / igbe, n'otu n'otu juru n'ọnụ m ...
Black 108mm Sterilized Tips With Grip Stop Long Disposable Tattoo Tips For Traditional Tattoo Mkpa
108mm Black Disposable Tattoo Atụmatụ na adịgide adịgide E Nwere Nha: ** 3R-5R-7R-9R-11R-13R-15R-18R ** 3D-5D-7D-9D-11D-14D-18D ** 4F-5F-7F -9F-11F-13F-15F R: eji maka eriri liner & shader, ọ bụ F: eji maka mbadamba & magnum, ọ bụ D: a ga-eji ndụmọdụ Diamond mee ihe maka eriri ma ọ bụ agịga shader, ọ bụ ezie na a na-ejikarị ha eme ihe dị ka ọdịdị nke n'ọnụ na-enye ohere ndị ọzọ akara megide agịga ije mgbe na-enye a uzo maka ink eruba. Okwu mmeghe: A na-ere site na BOX OF 50 High quality ...